“ငါတို့ကို တိုင်းပြည်နှင့်သာသနာက လေးစားတယ်ဆိုတာ အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ပဲ၊ ငါကတော့ သာသနာ့ကျေးကျွန်အဖြစ်ခံယူပါရစေလို့ ဒီလိုပဲ ခံယူထားပါတယ်၊ ငါတပည့်တွေကိုလည်း ကိုယ့်သာသနာ ကိုယ့်ဘာသာအတွက် အနစ်နာခံတဲ့စိတ် စွန့်လွှတ်တဲ့စိတ်နှင့် အလုပ်လုပ်စေချင်တယ်”
သီတဂူစတားရဲ့ ပြည်ပပညာရေးအတွက် လိုအပ်တာမှန်သမျှ ထောက်ပံ့နေသော ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပါသည်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရုံသာမက စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုလည်း တွန်းအားပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ သည် သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နှင့် ထေရ၀ါဒသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒတက္ကသိုလ်များ အစည်းအဝေးတွင် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသနှင့် အမှတ်တရ
တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ ဆိုရင် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်စွန့်ကြိုးပမ်း လုပ်နေသူ အကုန်လုံးကို လေးစားတယ်.. (သီတဂူဆရာတော်)
သူတော်စင်တို့ ကိန်းအောင်းရာ မြေမြတ်မဟာ ရွှေဇေယျာရဲ့ သဘာဝအလှ။
စစ်ကိုင်း သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ၀င်ပေါက်
သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီး၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကြီး၊ ထိုခန်းမကြီးဖွင့်ပွဲအဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒတက္ကသိုလ်များ အစည်းအဝေးကြီး ခန်းနားထည်ဝါစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော် မှ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၃၀၀ကျော် တက်ရောက်ကြသည်။
သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကြီး၏ အတွင်းပိုင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒတက္ကသိုလ်များ ညီလာခံကြီးကျင်းပစဉ်။
တက္ကသိုလ်ကြီးကို စာသင်ဆောင်၊ ကွန်ပျူတာဆောင်၊ စာကြည့်တိုက်၊ အစည်းဝေးခန်းမဆောင်၊ ဓမ္မသဘာဆောင်၊ ပြန်ကြားရေးဆောင်၊ ဘုရားဆောင်၊ ဆွမ်းစားဆောင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်၊ မော်ကွန်းထိမ်းဆောင်၊ ပါမောက္ခေချုပ်ဆောင်၊ အဓိပတိဆောင်၊ ထေရာဝါသ သုံးထပ်ဆောင်စသည်ဖြင့် ၂၉ဆောင် နှင့် ဆရာများအတွက် အခန်းပေါင်း ၃၂ ၊ ဆက်သွယ်ရေး အင်တာနတ်ဆောင် စသည်တို့ဖြင့် တံဆာဆင်ထားသည်၊
He is taking some lectures at Sitagu International Buddhist Academy in Yangon of Myanmar.
ဆရာတော် ၃ပါးတရား ပရိတ်တရား
ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာ
ကောင်းတဲ့ စိတ်၊ စေတနာလေး ထည့်လိုက်ရင်
၂၄ နာရီလုံးလုံး ကုသိုလ်တွေချည်းပဲ။
တိပိဋက (ပါဠိ+မြန်မာ+ အင်္ဂလိပ်)
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် မြန်မာပြန်
ဗုဒ္ဓစာပေ (Sri Dhammananda)
အင်္ဂလိပ်စာ သင်နည်း (မြန်မာ)
“ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာ ကောင်းတဲ့ စိတ်၊ စေတနာလေး ထည့်လိုက်ရင် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းက ကုသိုလ်ကံတွေချည်းပဲ။ ၂၄ နာရီလုံးလုံး ကုသိုလ်တွေချည်းပဲ။” (သီတဂူစတား ၂၄-၀၂-၂၀၁၃နေ့အမှတ်ရဓာတ်ပုံ)
အပြည်ပြည်ဆိုင် သီတဂူ ၀ိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာန (စစ်ကိုင်း) SITAGU INTERNATIONAL VIPASSANA ACADEMY (SAGAING) သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီး၏ ဦးစီးပဓာနဖြစ်တော်မူသော သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ၁။ စစ်ကိုင်းတောင် ရေအလှူတော်စီမံကိန်း ၂။ သီတဂူအာယုဒါန ဆေးရုံတော် ၃။ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)နှင့် ၄။ သီတဂူ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ၅။ သီတဂူ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ၆။ နာဂစ်အလှူတော်များနှင့် စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံအလှူတော်များ နှင့် ၇။ သီတဂူဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ (အမေရိက) အစရှိသော ပရဟိတ စီမံကိန်းကြီးများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုဖြင့် အောင်မြင်စွာ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီ။ စစ်ကိုင်းတောင်သည် သမိုင်းအစဉ်အလာအရ ပရိယတ္တိ ပဋိပတ္တိ ပဋိဝေဓသာသနာ ထွန်းကားခဲ့ရာနေရာဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ထိုမြေမြတ်မဟာဝယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီတဂူ ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကြီးကို အကောင်အထည်ဖော်နေပါပြီ။ အလှူဒါနပြုရန် အခွင့်ကောင်းကို ချောင်းနေသူများအတွက် အသိပေးလိုက်ပါသည်။
ဟေ့- မြန်မာဟာ မြန်မာပဲကွ၊ မြန်မာဟာ မြန်မာပြည်ကို ချစ်ရမယ်။ မြန်မာဟာ မြန်မာပြည်မှာပဲ နေရမယ်။ မြန်မာပြည်မှာပဲ သေရမယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရေမြေခြားကို ရောက်နေပေမယ့် တစ်နေ့နေ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ရမယ်။ အခွင့်အရေး တစ်စုံတရာကြောင့် နိုင်းခြားသားလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မကူးနဲ့။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်
မြန်မာ့မြေကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာသော မည်သူ့ကိုမဆို ဆန့်ကျင်ကြ။ မြန်မာပိုင်မြေ-ရေ-တောတောင် သယံဇာတ သွေးစုတ်ကောင်တွေရန်က ကာကွယ်ကြ။
`အနုမောဒနာ သွဝါဒ´ တရားတျော(၃)
The Lion’s Outlook, Sitagu Students’ Research Journal vol. 9
Sitagu International Buddhist Missionary Association (SIBMA)
သီတဂူ သတငျးနှငျ့ လှုပျရှားမှုမြား
သီတဂူစတား - Yangon, Burma - Event, Religious Center | Facebook
Software ဆိုင်ရာ Download များ
သီတဂူစတား ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာဂန္ထ၀ါစကပဏ္ဍိတ
Friday, February 05, 2021 sitagustar No comments
Sunday, November 06, 2016 sitagustar No comments
သီတဂူ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ ၆
သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသုိုလ်များ၏ အဓိပတိ သီတဂူဆရာတော်ကြီး၊ တပည့် စာချ ဆရာတော်များနှင့် တပည့် ကပ္ဗိယကာရက အဖွဲ့တုို့သည် အင်ဒုိုနီးရှာနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် ဗုဒ္ဓဘာသာအစည်းဝေးတက်ရောက်ရန်နှင့် လေ့လာရေး ခရီးအဖြစ် သွားရောက်မည်။
အင်ဒုိုနီးရှားနိုင်ငံ Borobudur Temple in Magelang ၌ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆုိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသုိုလ်များ၏ (IATBU International Theravada Buddhist Universties) အစည်းဝေးများကုို နိုဝင်ဘာ ၁၁ မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ထုိုအဖွဲ့၏ ဥက္ကဖြစ်တော်မူသော သီတဂူတက္ကသုိုလ်များ၏ အဓိပတိ သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် နောက်ပါ တပည့် စာချကထိများနှင့် သီတဂူကပ္ဗိယ ကာရက တပည့်များကုို ခေါ်ဆောင်ကာ အစည်းဝေးတက်ရောက်ပြီး၊ တပည့် စာချကထိများကုို တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာမြေဖြစ်ခဲ့သည် အင်ဒုိုနီရှားရှိ အထင်ကရနေရာများနှင့် သမုိုင်းဝင် နေရာများကုို ကုိုယ်တုိုင်ကုိုယ်ကျ လုိုက်ပုို့မှာဖြစ်ပြီး၊ သမုိုင်းဆုိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အခြားမှတ်သားဖွယ်ရာများကုို ကုိုယ်တုိုင်ကုိုယ်ကျ တပည့်များကုို ရှင်ပြမှာဖြစ်သည်။
IATBU (International Association of Theravada Buddhist Universities ဆုိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီး နိုင်ငံတကာရှိ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓတ္ကသုိုလ်များအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ပုိုမုိုဖြစ်ထွန်းတုိုးတက်အောင်၊ သင်ကြားရေးဆုိုင်ရာ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာများ အပြန်အလှန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရအောင်၊ လဲလှယ်နိုင်အောင်၊ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်များ ကမ္ဘာသုို့ ပုိုမုိုဖြန့်ကျက်နိုင်အောင် စသည့် ရွယ်ရည်ချက်များဖြင့် ၂၀၀၆ ခန့်က ထုိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မဟာမကုဋ တက္ကသုိုလ်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ထုိုအဖွဲ့၏ အကြီးအကဲ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကိုလည်း သီတဂူဆရာတော်ကြီးကုို တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။
သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်းပြီး IATBU အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ပထမဦးဆုံး အစည်းဝေးကုို 2007 မြန်မာနိုင်ငံ ပုပ္ဗါးတောင်၊ Puppa Mountain Resort မှာ ကျင်ပခဲ့ပါတယ်၊ နိုင်ငံတကာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသုိုလ်မျာမှ တတ်သိ ကျွမ်းကျ ပညာရှင်များက သုတေသန စာတမ်းများဖတ်ကြားခြင်း၊ အမြင်ဖလှယ်ခြင်းတုို့ကုို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် IATBU အစည်းဝေးကြီးကုို ၂၀၀၉ ခုနှစ် စစ်ကုိုင်းတောင်ရုိုး၊ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသုိုလ်ကြီးမှာ ကျင်ပခဲ့ပြီး၊ ဆုိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးလုိုက် စာတမ်းများ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ ပါဠိစာပေ ပုိုမုိုရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံတကာ ပါဠိစာတမ်းများဖတ်ကြားခြင်း ပွဲတော်ကုို ထည့်သွင်းပြုလုပ်နိုင်ခဲပါတယ်။
တတိယအကြိမ်အဖြစ် IATBU အသင်ကြီး၏ အစည်းဝေးကြီးကုို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထုိုင်းနိုင်ငံ မဟာမကုဋ တက္ကသုိုလ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တော်မူသော သီတဂူအဓိပတိ ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ငွေအင်အား၊ လူအင်အား၊ အကြံအဥာဏ်ပေးပြီး ဦးဆောင် ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယ္ခု IATBU အသင်းကြီး၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အစည်းဝေးကြီးကုို တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကား တောက်ပခဲ့သည့် အင်ဒုိုနီးရှားနိုင်ငံ Borobudur Temple မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး၊ အစည်းဝေးကြီး အဓိက ဆွေးနွေးမည့် ခေါင်းစဉ်ကလုို့ အောက်ပါ အတုိုင်း အမည်ပေးထားပါတယ်၊၊၊၊
BUDDHISM IN CONTEMPORARY WORLD:
ယ္ခုအကြိမ် အစည်းဝေးပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးကုိုလည်း၊ အင်ဒုိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန်လည်ရှင်သန်ရေး၊ ရှိပြီးသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ ဘုရား၊ ကျောင်းကန် စေတီပုထုိုးများ မပျောက်ပျက်ရေး၊ ဗုဒ္ဓစာပေများ ပုိုမုိုထွန်းကားရေးတုို့ကုို ရှေ့ရှူး ရည်သန်ပြီး သီတဂူတက္ကသုိုလ်များအဓိပတိ၊ IATBU အသင်းကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက အဘက်ဘက်မှ အစွမ်းကုန် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။။
အသင်းကြီး၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အစည်းဝေးအခမ်းအနားများကုို သိရှိလုိုပါက အောင်ပါ အင်တာနက် လင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်ပါသည်။ http://atbu.org
"သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာ ရှိကြပါစေ"
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင် အုဌ်မြစ်တော်စီ မင်္ဂလာအခမ်းအနား
Tuesday, October 04, 2016 sitagustar No comments
သီတဂူ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ၄
ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် ၁၃၇၈ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လ္ဆန်း-၃ ရက် (၄-၁၀-၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ နံနက် ၈:၃၀ နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးတောင်ခြေရှိ သီတဂူ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏ "သဒ္ဓမ္မဇောတိကာ သန္တိမဟာ" ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ရန်အတွက် အုဌ်မြစ်တော်စီ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို တက်ရောက် ချီးမြှင့်တော်ပေးမူခဲ့ပါသည်။
"သဒ္ဓမ္မဇောတိကာ သန္တိမဟာ" ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမဆောင်ကို ရန်ကုန်မြို့၊ တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်၊ လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာ ရှိကြပါစေ”
“ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီးများ၏ နိဒါန်း” စာအုပ် ထွက်ပြီ
Thursday, September 29, 2016 sitagustar No comments
သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)မှာ သီတဂူအဓိပတိဆရာတော်ကြီး ပို့ချခဲ့သည့် “ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီးများ၏ နိဒါန်း” စာအုပ် ထွက်ပြီ။
ထိုစာအုပ်သည် စာမျက်နှာ ၃၅၀ ပါ၍ ဆိုက်ကြီးဖြစ်သည်၊
ခေါင်းစဉ် (ပို့ချချက်)ပေါင်း ၂၂ ခုပါဝင်သည်။
ကိုးကွယ်ခြင်းဘာသာများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ၊ အလွန်ရှေးကျသော ဇိုရိုစတာ (Zoroasterism)၊ အီရန်နိုင်ငံနှင့်ကိုးကွယ်သော ဘာသာ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ နိုင်ငံ၏ အကြီးအကဲဖြစ်ပုံ၊ ဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင် ဂျိန်းဘာသာ၊ ခရစ်ယန်ဘာသာ စတင်လာပုံ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ပေါ်ထွန်းလာပုံ၊ အစ္စလာမ်တို့၏ကိုရ်ကျမ်းနှင့် ဂျီဟက်၊ အစ္စလာမ်တမာန်တော်နှင့် ဂိုဏ်းကွဲများ၊ ဘေဘီလုံနှင့် ဟီဘရူးဘာသာအကြောင်း၊ ဂျူး။ ခရစ်ယန်နှင့် အစ္စလာမ်တို့ရဲ့ စံပြ အေဗရာဟန်၊ ဂျေးစက် မွေးဖွာရာ၊ အသက်ခံရာနေရာ၊ ဂျေးစက် အမေ စိန့်မေရီ ပျိုစစ်စစ်လား၊ ခရစ်ယန်တို့ သမ္မာကျမ်းစာ ကျမ်းသစ် ကျမ်းဟောင်းတို့အကြောင်း၊ ဂျေးစက်၏ တပည့်ကြီး ၁၂ ယောက်နှင့် အရေးပါသော တပည့်ကြီး စိန့်ပီတာ၊ ခရစ်ယန်တို့၏ ပညတ်တော် ၁၀ချက်အကြောင်းတို့ကို သမိုင်းရှုထောင့်၊ ပထ၀ီဝင်ရှုထောင့်၊ စာပေရှုထောင့်၊ အတွေးခေါ်ရှုထောင့်စသည်ဖြင့် ထောင့်ပေါင်းစုံမှ ပို့ချထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဘာသာတရားအားလုံးတို့ကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မ (ပိဋကတ်တော်)ဖြင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာထားသည်မှာလည်း ပို၍ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါသည်။
စာပေနှင့် အကြားအမြင် ဗဟုသုတတို့ကို လေ့လာဆည်းပူးတို့အတွက် လက်ကိုင်ထားသင့်သော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
ဖုန်း။ ။ ၀၁ ၅၈၁ ၇၇၇၊ ၀၁ ၅၈၁ ၈၈၈
Monday, September 26, 2016 sitagustar No comments
၂၀၁၆ B.A နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားများနှင့် အမှတ်တရ။ (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်)
မကြာမီ နေရာအသီးသီးသို့ ပညာဆက်လက်သင်ယူရန်၊ သာသနာပြုရန် ခွဲခွါသွားကြတော့မည်။
သာသနာပြုစွမ်းရည်တွေနှင့်အတူ အကျော်အမော်တွေ ဖြစ်ကြပါစေ။
Tuesday, September 13, 2016 sitagustar No comments
သီတဂူ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ ၁၃
အစ္စရေးနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးမှ သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ (၈)နိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို အစ္စရေးနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရုံးသို့ ပင့်ဆောင်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဗန်ဂျာမင် နေတန်ဉာဟု ၏ သီးခြားဧည့်ခန်းတွင် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်သည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် အစ္စရေးနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံး လူမှုဆက်ဆံရေးအမျိုးသမီးအရာရှိ ဆီမိုနာက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးချင်းကို ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်က ကျေးဇူးတင်စကား၊ ဆုတောင်းစကားများကို ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးချင်း၏ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ဘာသာရေးအခြေအနေများကို အနည်းငယ်စီပြောကြားရန် ၀န်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းသည်။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အချို့က ၄င်းတို့ယူဆောင်လာသော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ကြသည်။
သီတဂူဆရာတော်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော်(၅)သိန်းတို့၏ကိုယ်စား တက်ရောက်လာကြောင်း၊ ဆရာတော်ကြီးပြောကြားမည့် မိန့်ခွန်းသည် သံဃာတော် (၅)သိန်းတို့၏ မိန့်ခွန်းဖြစ်သည်ဟုမိန့်၍ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းစာရွက်(၄)မျက်နှာရှိ မိန့်ခွန်းစာရွက်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်။ ဆရာတော်ကြီးက ၀န်ကြီးချုပ်အား Spiritual Present (စိတ်ဓာတ်ရေးရာလက်ဆောင်)ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။ ၀န်ကြီးချုပ်က သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား မိမိကိုယ်တိုင်ဖတ်မည်ဟု ပြောသွားသည်။
၀န်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသောအခါ နေ့လည် (၂း၃၀)တွင် အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ နေ့လည်ပိုင်းအစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ (၁၅)ယောက်ခန့်စကားပြောကြသည်။ ထိုနေ့လည်ခင်းအစည်းအဝေး၌ သီတဂူဆရာတော်ကြီးက Power of Mind for World Peace= ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စိတ်၏စွမ်းအားဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မိနစ်၂၀ခန့် မိန့်ကြားခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ထိုနေ့နေ့လည်ဆွမ်းကို ဂျေရုစလင်မြို့၊ နိုင်ငံခြားရေးရုံးသီးခြားအခန်းတစ်ခု၌ မြန်မာ့သံရုံးမိသားစုက အချိန်မီ ဆက်ကပ်ကြသည်။ အစည်းအဝေးက ပုံမှန်ပေးသော နေ့လည်စာမှာ နေ့လည် (၁း၃၀)ခန့်ဖြစ်သည်။
ယနေ့အစည်းအဝေး ညနေ(၇း၃၀)တွင် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီး၊ ၀န်ကြီးချုပ်က ဧည်သည်တော်များအား ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ တတိယနေ့အစည်းအဝေးကို ဂျေရုစလင်မြို့ရှိ The Hebrew University (ဂျူးတက္ကသိုလ်)တွင် ဆက်လက်ကျင်းပမည်။
စက်တင်ဘာလ (၁၄)ရက် စတုတ္ထနေ့၊ ဂျေရုစလင်မြို့တွင် အရေးကြီးသော ဘာသာရေးဌာနများကို လိုက်လံပြသမည်။
စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးနေ့တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Haifa မြို့တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံဘာသာရေး ကောင်စီခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆက်လက်တွေ့ဆုံမည်။
ပထမအကြိမ် Israel – Asia, Ancient Tradition Contemporary Realities, Faith Leader Meeting များပြီးဆုံးသည်။
သူတော်ကောင်းတရား နေရာတိုင်းမှာ ထွန်းတောက်ပါစေ။
သီတဂူဆရာတော် ဂျေရုစလင် မိန့်ခွန်း
Your Excellency Mr. President / Prime Minister of Israel
It gives me great pleasure to be invited to this Summit Meeting of Israel-Asia Faith Leadership organized by Israel's Ministry of Foreign Affairs and the American Jewish Committee in collaboration with World Council of Religious Leaders with the noble theme to create better understanding and relationship between religious, intellectual and political leaders of Israel and Asia. I sincerely believe that frequent meetings of this kind would be highly conducive to the strengthening of world peace and stability.
The world today is full of chaos, full of crimes, full of miseries, full of evils, and full of violence. The nations are arming themselves to their teeth. Arm races among great countries are most frightening and the weapons they are using are highly destructive that people are living insecure lives.
The historic pages of world history have been marred by many atrocities and cruel wars, the root cause of which is evil mind that generates unpleasant situations and miserable events. The starting point of miserable events is selfish thought of egocentric human beings. The source of competition and conflict is the thought of jealousy or unhappiness over other's progress and success.
Today, I'm very much pleased to share one of the salient teachings of the Buddha over the power of mind, which is largely instrumental in establishing individual peace. This playsavery powerful stepping stone to to the promotion of world peace and stability.
We, human beings, are mysterious beings with inconceivable potentialities. Noble characteristics and criminal tendencies are latent within us. These may rise up to the surface of our lives at any time unexpectedly without using strength and power. These potentialities or tendencies are dormant within us in various degrees.
Within the powerful complex human's mind, we findatreasure vault of virtues and wisdom, then we findarubbish heap of wickedness and corruption. By developing these respective characteristics, we may become eitherablessing oracurse to humanity. We human beings, are consisted of both mind and matter. One of the Buddha's messages in (Manopubbangama Dhamma)- mind is forerunner, mind is chief in life, mind is the master of man, mind moulds the human life, mind makes happiness and suffering, mind creates beauty and ugliness. Therefore, human beings are architects of their own lives. Thus, in order to create our beautiful life or beautiful world or peaceful world, we must mould our mind to be beautiful and peaceful first.
Every religion calls upon their followers to liveamoral way of life and to attain mastery over the mind and to cultivate purity of heart. Whether it is the Bible or the Koran, or the Veda, or the Ti-Pitaka, all scriptures call for peace, amity and harmony. From Jina to Jesus, all great founders of all religions have emphasized it with virtues of tolerance and non-violence. But the world we live in is often driven by religious conflicts and sectarian strife, or even the war of brutal fighting. Because we usually attach importance only to the outer shell of religions and we overlook the universal truth or the inner core of religions. The result isalack of love, compassion, tolerance, forgiveness and self-understanding in the mind.
When there is no peace within individual, then there could not be peace in the world. Violence and peace never can coexist. The only way to achieve inner peace is insight meditation. This is non-sectarianism but scientific result-oriented technique of self-observation and self-realization of the truth.
Practice of Insight Meditation brings some unprecedented result -- that is -- experiential understanding of how mind and body are interacting.
Whenever negative emotion arises in human mind such as craving, jealousy, hatred, anger, ignorance and so on. These negative spirits trigger unpleasant sensations within the body. On the other hand, positive states sometimes arise in the mind such as tolerance, love, compassion, sympathetic joy and wisdom. At that time, mental actions create happiness and pleasant sensations within the body.
Every moment to moment, the mind generates hate or love, compassion or cruelty, sympathy or jealousy, positivity or negativity, pleasantness or unpleasantness and selfishness or selflessness. So the entire mind is flooded with pleasant sensation or unpleasant sensation all the time. Insight meditation reveals that mental action precedes every physical and vocal action, determining whether that action would be wholesome or unwholesome. That is why we must find practical methods to create pure and peaceful mind.
The practice of insight meditation can be used for keeping balanced mind and sound health. By exercising insight meditation, everyone can remove mental disease of negativities and can achieve balance of mind. The balanced mind will make unbalanced world balanced, stable mind will make unstable world stable and peaceful mind will make the violent world peaceful.
People of any faiths can practice such insight meditation without discrimination of caste, colour and creed. At the same time, they may follow their own religions and traditions in peace and harmony. There is no need for conversion of religion. A common source of tension and conflict create negativity only. Therefore, conversion is only for changing negative mind to positive mind. As an observer, one will findasociety to live in peace and harmony in its natural setting.
Today in the world, we see clearly various degrees of spiritual pollution like discontentment, dissatisfaction, disagreement, argument, demonstration, strikes, violence, invasion, aggression, and tension, etc. These spiritual pollutions are always creating bad consequences to human societies and human environment.
This is the manifestation of unbalanced and untrained mind. They are motivated by negativities latent within human mind. We all understand that we need to protect our environment and society, removing such mental pollutions.
People are searching foraplace of peace and tranquility. However, it can not be found in this materialistic world. So, let us change our mind from negativity to positivity. Removing such pollutants of negativities while seeking forbearance and selflessness promotes peace and harmony among human society as well as balanced mind and healthy relationship between human society and its natural environment. This is what all human beings have to practice for individual and world peace.
May all beings be free from aversion. May all beings be happy.
May Peace and Harmony prevail in every corner of the world.
Venerable Dr. Ashin Nyanissara (D.Litt., Ph.D.)
Chairman of the board of director of Theravada Dhamma Society of America
အစ္စရေးနိုင်ငံ သမ္မတအိမ်တော်ရောက် သီတဂူအဓိပတိ
သီတဂူ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ ၁၂
အစ္စရေးနိုင်ငံရောက် ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ၁၂-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့၊ Israel နိုင်ငံ Jerusalem မြို့ တွင် Israel နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ တာဝန်ယူ၍ World Council of Religious Leaders မှ September လ 11th - 15th 2016 ရက်နေ့ အတွင်း ကြီး မှူး ကျင်းပသော Israel-Asia Ancient Traditions Contemporary Realities Inter Faith Leaders Meeting သို့ တက်ရောက်ပါသည်။
ယနေ့ ၁၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် Israel နိုင်ငံ သမ္မတ HE Reuven Rubi Rivlin ၏ နေအိမ်၌ Conference ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ပါသည်။ ယခု conference တွင် Israel, India, China, Taiwan, South Korea, Japan, Canada, USA နိုင်ငံတို့ မှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် မိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှ သီတဂူဆရာတော်ကြီးတို့တက်ရောက်လာကြပါသည်။ သမ္မတအိမ်တော်တွင် ကျင်းပသော အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအပြီးတွင် အစ္စရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသို့ ကြွရောက်ပါသည်။
သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ သီတဂူအရှင်ဥက္ကံသ၊ သီတဂူဦးကျော်မိုးနိုင်၊ သီတဂူကိုအောင်သန်းဝင်းတို့က လိုက်ပါသွားကြပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမောင်မောင်လင်းနှင့်ဇနီးဦးဆောင်သော မြန်မာသံရုံးမိသားစုဝင်များက နေ့ဆွမ်း အလုပ်အကျွေးပြုစုကြပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒုတိယစစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုကိုဦးက ဆရာတော်ကြီး၏ PSO အဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Monday, August 29, 2016 sitagustar No comments
အောက်ပါအလှူရှင်များဖြင့် မကြာမီ သီတဂူစတား စာစဉ် (၄)စာအုပ်ကလေး တစ်အုပ်ထွက်မည်။
၁။ ဦးအောင်ခိုင်+ ဒေါ်ခင်နွဲ့ မိသားစု မုံရွာမြို့နယ်၊ ညောင်ဖြူပင်ရွာ ၁၀,၀၀၀၀ ကျပ်
၂။ ဦးဘိုနီ+ဒေါ်ခင်စောငွေ မိသားစု မြင်းခြံမြို့နယ်၊ လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ ၁၀,၀၀၀၀ ကျပ်
၃။ ကိုဆွေထွန်းနောင်+မသန်းသန်းလှ သမီး အင်ကြင်းမွှေး မိသားစု အင်းစိန်၊ အောင်ဆန်း ၅,၀၀၀၀ ကျပ်
၄။ ဦးဆန်းမောင်+ဒေါ်တင်ရေ မိသားစု၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ မင်းမောင်းကုန်းရွာ ၅,၀၀၀၀
၅။ မိဘနှစ်ပါးကို အမှူးထား၍ ဒေါ်စပယ် (လှဆန်းယဉ်) လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့၊ ရန်ကုန် ၅,၀၀၀၀ ကျပ်
ဓာတ်ပုံ စင်္ကာပူဓမ္မသဘင် (ဒုတိယအကြိမ်)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သီတဂူအဓိပတိအား လာရောက် ဖူး
Sunday, August 21, 2016 sitagustar No comments
သီတဂူ ၂၀၁၆ သြဂုတ် ၂၁
မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တပ်မတော်ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများသည် ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ၂၁-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့၊ နံနက်ခင်း ၉း၃၀ နာရီအချိန် လာရောက်ဖူးမျှော်ကြည်ညိုကြပါသည်။
တပ်ချုပ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ကို သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝိပဿနာအကယ်ဒမီ (စစ်ကိုင်း) တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများ၊ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်အတွင်းရှိ ဆင်းတုတော်များနှင့် ဓမ္မာရုံကြီးအတွင်းသို့ သီတဂူဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တော်တိုင် လိုက်လံပြသပေးတော်မူပါသည်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့က သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း) ရှိ သိမ်တော်ကြီးအတွင်း သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပြီး သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ရေစက်ချအနုမောဒနာတရား ချီးမြှင့်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။
စာရေးသူ သီတဂူစတား၏ဘ၀ကို အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်မှ အခြေခံကျကျ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်၊ ထို့နောက် သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှ ထိုရရှိလာသော ဘ၀ကို အသုံးချ ဘ၀ရောက်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤဘလော့ဂ်သည် ဘ၀နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သလို သီတဂူစတား၏ ဘ၀နှစ်ခုကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။
အရှင်ကောဝိဒသိရီ (သီတဂူစတား) Kovida
Sitagu International Buddhist Academy (YGN)
Dagon (North), Yangon, Myanmar
Phone: 09-7956-30013/09-250 790 483
အီမေးလ်= sitagustar.0073@gmail.com ၊ sitagustar2010@gmail.com
အကောင်းဆုံး သာသနာတော်အကျိုးပြု စာပေဘလော့ဂ်ဆု အတွက် သီတဂူစတားကျေးဇူးစကား အနည်းငယ်မျှ ပြောပါရစေ။ နှမ်းတစ်လုံးတည်းနှင့် ဆီမဖြစ်သလို သီတဂူစတား တစ်ယောက်တည်းနှင့် ဘလော့ဂ်ဆုရဘို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စည်းလုံးမှုရဲ့ အင်းအားတစ်ခုတည်းနှင့် ရရှိလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သီတဂူစတားကို အားပေးကြတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်၊ သီတဂူစတားအား ဘလော့ဂ်ပညာတွေ နဲနဲချင်း သင်ပေးနေတဲ့ ညခင်းရဲ့လမင်း သီတဂူစတားရဲ့ ဒိုမိန်းခေါင်းစဉ် photo ပညာဖြင့် ပူဇော်ပေးသော မေမေ့လပြည့်ဝန်းလေး နှင့် ဆုများချီးမြင့်သော မြန်မာဘလော့ဂ်ပရပ်စ် နှင့် မြန်မာပြည်က စာဖတ်ပရိသတ် ၀င်ကြည့်နိုင်ရန် net လှူပေးသော အမေရိကမှ ဦးကိုကိုနှင့် ကိုခွန်သီရိ တို့ရဲ့ စေတာနာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမှတ်-၁၀၊ ပါရမီလမ်းနှင့် ပင်လုံလမ်းဒါင့်၊ ဘေလီတံတားထိပ်၊ ဒဂြုံမို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊
ဖုန်း-၀၁-၅၈၁ ၉၉၉/ ၅၈၁ ၈၈၈/ ၅၈၁ ၇၇၇
ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အနိမ့် အမြင့်၊ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ကျရှုံးမှုနှင့် အောင်မြင်မှုတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ် ကိုယ့်ရဲ့ အပြော ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာပါ။
“လူတွေက သေခြင်းတရားကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်၊ သေရမှာကို မေ့နေတတ်ကြလို့ပဲ အတ္တတွေ မာနတွေ ဖုံးလွှမ်းပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန် စိတ်တွေ မွေးဖွားတတ်ကြပါတယ်၊ ထိုအခါ လူ့ပတ်ဝန်ကျင်နဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သေခြင်းတရားကို အမှတ်ရစေခြင်းသည်လည်း လူ့ပတ်ဝန်ကျင်အတွက် အကောင်းတကာထဲက အကောင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။”
သီတဂူစတားသည် သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ စီမံမှုဖြင့် သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် ကထိက၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည်။
သီတဂူစတားသည် စာရေးဆရာမဟုတ်ပါ သို့သော်လည်း စာရေးချင်ပါသည်၊ သီတဂူစတားဆိုက်ကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုသဘောအနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ကြီးကျယ်တဲ့ဆိုက် မဟုတ်၍ ကြီးကျယ်သော စာများကား မဟုတ်။ သို့သော်လည်း တိုလီတိုထွာ ဗြုတ်စဗြင်နောင်လေးတွေ မှတ်စုအဖြစ် ရေးပြီး တင်နေသူပါ။ ဒါလေးတွေက ကျွန်ုပ်ရဲ့ မပြောပါးလောက်တဲ့ ရှိစုမဲ့စုလေးတွေ အကုန်သုံး ထုတ်ပြထားတဲ့ အမည်လေးတွေပေါ့။ သီတဂူစတား (စာရေးသူ) အသက် ၁၄ နှစ်လောက်ကထဲက အမရပူရဲမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် ဘ၀ကိုမြုတ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ထိုစာသင်တိုက်မှာဘဲ ရဟန်းတော်များရသင့်ရထိုက်တဲ့ အနည်းငယ်သော ဘွဲ့တွေလဲရခဲ့ပါတယ်၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ (၁၉၉၉)၊ မဟာဂန္ဓာရာမိကဓမ္မာစရိယ (၁၉၉၆)၊ ၀ိနယနိကာယ၀ိဒူ (၁၉၉၄)၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ၀ိဒူ (၁၉၉၈)ဘွဲ့များမဖြစ်စလောက် ရခဲ့တယ်၊ ဒုတိယပိုင်းဘ၀တစ်စိတ်ကိုတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကစပြီး သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ထို တက္ကသိုလ်ကြီးမှပင်၂၀၀၁ ခုနှစ်ှ English Diploma (2003)၊ Japanese Level4&3(2004/5)၊ နှင့် ၂၀၀၇ ခု B.A (Buddhism) ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပူနေးမြို့၊ ပူနေးတက္ကသိုလ်မှာ (Philosophy)ဒဿနိကဗေဒနှင့် M.A ရရှိပြီး ယခုအခါ သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ အထောက်အပံ့ဖြင်ပင် စောမယကောလိပ် ဘုံဘေမြို့၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ Ph.D အတွက် စာတမ်းရေးပြီး ကျမ်းတင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွင် ကထိကတာဝန် ယူလျှက်ရှိသည်။
ဆောင်းပါးနှင့်ဓာတ်ပုံများ The word is an invaluable likeajewel if it gives the knowledge or is able to makeaperson's situation change ( that is fromalower state toahigher state) withaword. In this day, there arealarge number of persons who are searching for and giving it so that you are also one of them. Are you who searching for it or giving it? If you all my dhamma friends haveawish to give the profits to the people like knowledge, send it with or without photos as well as amazing photos to this very mail(sitagustar.0073@gmail.com). ကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အပြောင်းလွဲလေးတစ်ခု (အပြောင်းအလဲဆိုသည်မှာ ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်း) ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီစကားဟာ အဖိုးမဖြက်နိုင်တဲ့ ရတနာပါ။ ယနေ့ ခေတ်မီးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ လူငယ်ရော လူကြီးပါ အွန်လိုင်းကနေဘဲ ရတနာတွေရှာနေကြပါတယ် ရတနာတွေ ပေးနေကြပါတယ်၊ မျှဝေဘို့လည်းမျော်နေကြပါတယ်။ ထူးစမ်ထွေလာဓာတ်ပုံများ၊ သတင်းထူးများ၊ အကျိုးပြုဆောင်းပါးများ ပေးပို့ နိုင်ပါပြီ။
“ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီးများ၏ နိဒါန်း” စာအုပ် ထွက်ပြီ ************************ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)မှာ သီတဂူအဓိပတိဆရ...
၁၃၇၃-ခုနှစ် နယုန်လပြည့်နေ့မှ လပြည့်ကျော် (၄) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြော...
တမင်လုပ်ကြံရေးထားတဲ့ သုတ္တန် ''အဲဒါကို ဒကာကြီး ငြင်းချင်သေးလား''ဆိုတော့ '' ဒီသုတ္တန်ဟာ တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်က တမင်ေ...
ဒီနေ့ သင်တန်းစတင်ပိတ် ********* ၂၀၁၆ B.A နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားများနှင့် အမှတ်တရ။ (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်) မကြာမီ နေရာအသီး...
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင် အုဌ်မြစ်တော်စီ မင်္ဂလာအခမ်းအနား ************ သီတဂူ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ၄ ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာ...
အစ္စရေးနိုင်ငံ သမ္မတအိမ်တော်ရောက် သီတဂူအဓိပတိ *********** သီတဂူ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလ ၁၂ အစ္စရေးနိုင်ငံရောက် ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရာြး...
သီတဂူ Study Tour အင်ဒိုနီးရှား ********** သီတဂူ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ ၆ သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသုိုလ်များ၏ အဓိပတိ သီတဂူဆရာတော်ကြီး၊ တပည့် စာချ ဆရာတော်များနှင...
သီတဂူအာယုဒါနဆေးရုံ (စစ်ကိုင်း) မျက်စိကုသ
သီတဂူအာယုဒါနဆေးရုံ (စစ်ကိုင်း) မျက်စိကုသ စစ်ကိုင်းတောင်၊ သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ ဆေးရုံပေါင်းများစွာတွင် ပထမဦးဆုံး တည်ထောင်ထားသော သီတဂူအာယု...
ကောင်းမွန် ဓမ္မဒူတခရီးသွားမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၄)
အခန်းအနားအစီအစဉ် နံနက်ပိုင်း အစီအစဉ် အခမ်းအနားကို နံနက် (၉း၃ဝ) နာရီတွင် စတင်သည်။ ဟောပြောကြမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ စာရေးသူတို့ သုံးပါးန...
သူတစ်ဖက်သား မျက်မာန်ပွားသော် တရားမကွာ ထိန်းစောင့်ကာဖြင့် မေတ္တာနှလုံး ကိုယ်ကသုံးလျှင် အရှုံးဘယ်မှာ ရှိချိမ့်နည်း။ (မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး)
သီတဂူစတား၏ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော် အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ သည် အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်ကြီး ၏ နာယကချုပ်ဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်က သယံဇာတ ပေါများတယ်၊ အလားအလာလဲ ကောင်းပေမဲ့ မတိုးတက်တာကတော့ ငါ မကျေနပ်ဘူး။ ၁-၁၂-၂၀၁၂ ဗုဒ္ဓဂယာ ရောက်စဉ်က ဟိုတယ်မှာ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တရာဇဓမ္မာဘိဝံသမိန့်ခဲ့။
သင်ဘာတွေးသလဲ? သင်ဘာပြောသလဲ? သင် ဘာလုပ်သလဲ? သင်တွေးသမျှ ပြောသမျှ လုပ်သမျှတိုင်းသည် သင်၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်သည်။
စာတို ပေတို (16)
တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့် (7)
တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲ (14)
တက္ကသိုလ် သတင်း (40)
သဘာဝဘေးရန် သတင်း (38)
ဆန္ဒကို ကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာနဲ့ ထိမ်းပါ၊ လူရဲ့စိတ်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ မွေ့လျော်တတ်သည်၊ ထိုသို့ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ ဆန္ဒရှိလာရင် ကိုယ့်သိက္ခာ၊ ကိုယ့်ဂုဏ်၊ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ထိမ်းပါ။
သီတဂူစတားနှင့် ဆွေးနွေးလိုသူများ sitagustar2010@gmail.com သို့ ကြွရောက်ပါရန်။ ဖုန်း 09-79 56 300 31/ 09-250 790 483
သီတဂူစတားကို စာပေပညာ၊ ဘ၀နေထိုင်နည်းနှင့် အသိပညာတွေ ပေးလိုက်သော အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၏ မြင်ကွင်းတစ်ခု။
အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်သည် မိသားစုစနစ်ဖြစ်သည်အားလျော်စွာ ဤကဲ့သို့တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဆွမ်းဘုန်းကြရသည်၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သံဃာ ၁၃၀၀၀ ကျော်ကို လှူနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စေတနာသည်လည်း အလွန်ချစ်စရာပါ။
လက်ဆော့ရင်း ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ စတားရဲ့ အမှတ်သားတစ်ခု။
သီတဂူစတားရဲ့ ငယ်ဘ၀ကို အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်မှာပဲ မြုတ်နှံခဲ့ပါသည်။ ငယ်ဘ၀ကို ပြန်တမ်းတနေမိတယ်၊ ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အတူ ညနေခင်း ဦးပိန်တံတားပေါ် လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတဲ့ဘ၀လေးကို မြင်ယောင်နေမိတယ်။
ဆွမ်းကပ်အလှူရှင် ရှိသောနေ့များတွင် ဤကဲ့သို့ သင်္ကန်းရုံကာ ဆွမ်းစားကျောင်းမှာ ဆွမ်းလောင်းရန်စောင့်နေကြသည့် အလှူရှင်များထံမှ ဆွမ်းများအလှူခံကာ ဆွမ်းစားကျောင်းမှာ အတူတကွဘုန်းပေးကြသည်။
သီတဂူစတား ငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့ ညွန့်သန်းကျောင်း၊ မန္တလေးမြို့ ရွှေကုန်သည် ဒေါ်ညွန့်ညွန့် ဒေါ်သန်းသန်းတို့ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသောကျောင်း၊ ဆရာတော်ကြီးစာချကျောင်း ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။
ဆွမ်းကပ်မည့် အလှူရှင် မရှိသောနေ့များတွင် ဤကဲ့သို့ သင်္ကန်းမရုံဘဲ မြို့ထဲမှာ လောင်းလှူလိုက်သော ဆွမ်းဟင်းများကို ဆွမ်းစားကျောင်းမှာ တစုတဝေးတည်း စားကြရသည့် မိသားစု စနစ်ဖြစ်သည်။
သီတဂူစတား ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးသည် ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ၊ ၁၃-၈-၂၀၀၉ ခုနေ့ ဦးကော- ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်တစ်ခု ဖန်တီးမလားဟု မြန်မာပြည်မှ ဦးဝိစိတ္တ မေးလာပါသည်၊ ဘလော့ဂ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပေမဲ့ ရေပန်းစားနေတာတော့ သိနေပါသည်၊ စိတ်ဝင်စားမှုရဲ့ နိုးဆော်မှုကြောင့် ဖန်တီးဖြစ်သွားပါသည်၊ သိုသော် ဘလောဂ်ထဲမှာ ဘာမှမရှိသေးပါ၊ သီတဂူအရှင်ဒေ၀ိန္ဒာဘိဝံသ အကြံပေးလားပါသည်၊ ဦးကောရေ လုပ်မည့်လုပ်တော့ ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ပါ၊ ကူညီပေးပါမည်ဟုပြောလာသဖြင့် ဘလော့တစ်ခု ပီပီပြင်ပြင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရောက်လာပါသည်၊ ညခင်းနှင့်လမင်းရဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အားပေးမှုတွေကြောင့် ဘလော့ဂ်လေးဟာ ပိုပြီးတောက်ပလာပါတယ်။ ဤဘလော့ဂ်ကို မြန်မာပြည်သူတွေ ကြည့်ခွင့်ရအောင် လှူဒါန်းသူ မောင်ကိုကို (အမေရိက) ထာဝရအလှူရှင် ကိုခွန်သီရိတို့အားလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ရက်။ ။၁၃-၈-၂၀၀၉
အသည်းအထူးကု ဆရာဝန် ခင်မောင်ဝင်း
ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန
အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန
အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန
Copyright © 2011 သီတဂူစတား | Design by ညခင်းရဲ့လမင်း
Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes